युभेन्ट्समा नै बस्न चाहन्छु::Leading News Portal From Nepal.
ALLIANZ STADIUM , TORINO, ITALY – 2018/10/02: Paulo Dybala of Juventus FC celebrate after scoringagoal during the Uefa Champions League Group H match between Juventus Fc and Berner Sport Club Young Boys. Juventus fc wins 3-0 over Berner Sport Club Young Boys. (Photo by Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images)
युभेन्ट्सका स्टार पाउलो डिबेलालेले क्लब छाड्न नचाहेको प्रष्ट पारेका छन् । म्यानचेस्टर युनाइटेड र टोटेनह्यम जाने चर्चाका बीच अर्जेन्टिनी फरवार्डको सम्झौता अन्तिम समयमा हुन नसकेको बताइएको थियो । तर, त्यसता डिबेलाले आफुले कहिले पनि क्लब छाड्न नचाहको बताएका छन् ।
‘यो पहिलो पटक भएको हैन । तपाईको नाम जता पनि आउँदा खुसी लाग्छ । तर यो फुटबल हो ,’ उनले भने ,’ मैले भन्दै आएको छु । म यहि बस्न चाहन्छु । जति बेला सम्म यहाँ रहन्छु आफुलाई मैदानमा प्रमाणित गर्न चाहन्छु । ‘ उनले युभेन्ट्समा खेल जीवनलाई निरन्तरता दिन चाहेको पनि बताएका छन् ।’
‘म यहि खेल्न चाहन्छु । मलाई लाग्छ इन्टर मिलानविरुद्ध जस्तो प्रदर्शन म दिन सक्छु । म मानसिक र शारीरिक दुवै हिसाबले चुस्त छु,’ उनले थपे, ‘म प्रशिक्षक माउरिजियो सारीसँग प्रभावित छु । उनसँगको सहकार्यमा मलाई खुसी लाग्छ । सारी र पूर्व प्रशिक्षक एलिग्रीको खेलाउने आ आफ्नै तरिका छ ।’ सारीलाई पनि डिबेलालाई पनि नियमित पहिलो रोजाईमा कसरी राख्ने भन्ने चिन्ता छ । उनले यो सिजनले ७ खेल खेल्दै १ गोल गरेका छन् ।